Ajuju A N'aju Kari Mbe Nile
Ajuju A N’aju Kari Mbe Nile
Jumia Travel Na Aza Ajuju Gi Nile
Nke Amama Kari A
Usoro Maka Itinye Akwụkwọ
Ngwangwa Eji Ebi Ndu Na Atumatu Nke Họtelu
Kedu otu esi etinye akwukwo?
I tinye akwukwo na Jumia Travel di mfe! Maka ihu ka osi aruoru, pia na ebe a.
Tinye aha họtelu ma ọ bu kwanu mpaghara obodo ichoro inoo, na ebe ana achota ihe nke di na igwe ozi anyi a na akpo (website na okwu beeke) ma pia kwa na choputa. I nwere ike I ji ihe eji achota ihe nkwankwa, ma obu kwanu ga akpoturu onye ndumọdụ nke ime njem anyi.
Kedu otu m ga esi mara na akwukwo ntinyere gara nke oma?
Ozugbo I mere ka odoo-anya maka akwukwo itinyere maka I debere gi onodu na ulo họtelu, I ga enweta ozi leta nke na egosi na I debanyere aha gi tinye kwara ihe ngosi. Oburu I na tacha ozi leta a, onodu na họtelu buzi nke gi! Oburu ga acho igbanwe Ihe ndi I debanyere, kpoturu ndi ndumọdụ nke ime njem anyi.
Odi nchekwa itinye akwukwo na Jumia Travel?
Nezi a, anyi n’enye nhọrọ abuo maka akwumugwo, nke a na a dabere na họtelu di iche-iche. Oburu na gi aghoro “Kwuo ugwo ugbu a”, I ga eme nka n’uzo azụmahịa n'etiti gị na Jumia Travel site na igwe kọmpụta azụmahịa nchekwa tara ochichi. Ọ dịghị mgbe anyị ga-eziga ihe nkowa kaadị akwumugwo ego gi (krediti kaadi) na họtelu. Ọ bụrụ na gị na-ahọrọ "Kwuo ugwo ma e mesia" mgbe ahụ, ị ga akwụ kpọmkwem na họtelu ma I biarue - odịghị mkpa dikwa ịkọrọ ọnye ọbụla ihe nkowa kaadị akwumugwo site na igwe computa ọbụla.
Olee otú m’ga esi akagbu akwukwo mtinyere site na Travel.jumia.com?
Nke a di Mfe!
Ọ Bụrụ na ị nwere akaụntụ: Nanị banye na akaụntụ gị na Travel.jumia.com. Gaa na Akaụntụ Mu (n'elu aka nri akuku nke peeji), wee pịa na ntinye akwụkwọ m ma na-eso kwa ntụziaka.
Ọ bụrụ na ị nweghi akaụntụ: Gaa na "Jikwaa ntinye akwụkwọ m” (n'elu aka nri akuku nke peeji). Tinye akara nọmba akwukwo itinyere na aha ikpeazụ gi ma pịa kwa na Gaa.
Họrọ akwukwo ntinye ị ga-achọ ikagbu. Debanye ihe na ohere ndi kwesiri ma pia kwa na "kagbuo ntinye akwukwo".
I nwekwara ike kpọ onye ndumọdụ nke ime njem anyi otu n'ime ndi nnọchite anya anyi ga- enwe obi ụtọ inyere gị.
Cheta na họtelu nwere nnoo kpọmkwem uzo mkagbu atumatu nke akọwara na peeji họtelu. Biko lee anya na atumatu ndi a mgbe I na etniye akwukwo maka I dosara gi ọnọdụ na họtelu.
Kedu otú m nwere ike isii mee ka ntinye akwukwo diwanye mma?
I mee ka ntinye akwukwo gi diwanye nma, biko kpọtụrụ onye ndumọdụ nke ime njem anyi onye ga elekọta maka gị.
Enwere m ike itinye akwukwo ma ọ bu kwanu debanye aham maka I dosaram onoodu na hotelu na enweghị kaadị akwụmụgwọ? (Krediti Kaadi)
Otutu họtelu n’enye nhoro "Kwuo ugwo na họtelu". Ebe ọ bụla ị na-ahụ nhọrọ a, ị pụrụ ime ndoputa nka a na Travel.jumia.com ma-kwụo ugwo nanị mgbe ị na abata na họtelu, ebe nani I puru iji ego ma obu were kaadi gi kwuo-ugwo. Ị pụrụ ịhụ ihe ụdị nke ịkwụ ụgwọ nke ulo họtelu na-anabata na "akwụmụgwọ", n'okpuru "Ọnọdụ" ngalaba ihe nkwo peeji nke họtelu.
Kedu otú m nwere ike I si hụ onu ego ole onu ụlọ họtelu bu?
Ozugbo ị banyere ụbọchị nke ọnụnọ gị, Aga enwe ihe ngosi puru iche bu nke ga egosi na akuku họtelu obula na udi onu ụlọ ndi di na ya.
Gịnị ka onu ahia na-agụnye?
Onu ego ahia egosiri na websaịtị mgbasa ozi kọmputa bụ mkpokọta onu ego ị ga-akwụ maka ulo onunu gi. Ọ bụrụ na họtelu ọ bula asi gi kwuo-ugwo zoro ezo obula n'ụdị kaadị eji akwu ụgwọ, ụtụ isi echetaram echetaghim, kpọ onye ndumọdụ nke ime njem anyi ozugbo na atufughi oge obula. Ọ gwula ma o dabere n'ụzọ doro anya na akwụkwọ Itinyere, na onu ego agunyeghi mmanya onu ọṅụṅụ, ihe omueme echetaram echeghim. Agbakunyere nri oriri bu nke dabere na ụdị ntinye akwukwo I mere (akwa ndina nanị: adịghị nri, akwa ndina na nri ụtụtụ: nri ụtụtụ so ya, ọkara atumatu: agụnyere nri abụọ, atumutu zuru oke: agụnyere nri nile).
Onu ahia ego ndi Travel.jumia.com odị ọnụ ala karịa nke ndi nabata oche ihu nke họtelu?
Anyị na-agbalị si ike I nweta onu ahia họtelu ndi kasị mma maka o di nma gị. Ma otú ọdi, anyi adịghi ekwe gi nkwa na onu ahia ị ga enweta na Travel.jumia.com ga na adi ala mgbe nile karịa nke ndi họtelu.
Kedu otú m ga-esi enweta ụgbọala ga ebute na ọdụ ụgbọelu?
Ọtụtụ n'ime họtelu na-enye ụgbọala na ebute madu site na odo ụgbọelu. A na edepụta kari nke a dika otu akụkụ nke ihe eji ebi ndu nke họtelu. Ọ bụrụ na ha anaghi enye ihe ndi di otua eji ebi ndu, anyi ga agba mbo nye gi ha. Kpo ndi ndumọdụ nke ime njem anyi maka ichọpụta na nkowa banyere nka a.
"Nezi a, anyi n’enye nhọrọ abuo maka akwumugwo, nke a na a dabere na họtelu di iche-iche. Oburu na gi aghoro “Kwuo ugwo ugbu a”, I ga eme nka n’uzo azụmahịa n'etiti gị na Jumia Travel site na igwe kọmpụta azụmahịa nchekwa tara ochichi. Ọ dịghị mgbe anyị ga-eziga ihe nkowa kaadị akwumugwo ego gi (krediti kaadi) na họtelu. Ọ bụrụ na gị na-ahọrọ "Kwuo ugwo ma e mesia" mgbe ahụ, ị ga akwụ kpọmkwem na họtelu ma I biarue - odịghị mkpa dikwa ịkọrọ ọnye ọbụla ihe nkowa kaadị akwumugwo site na igwe computa ọbụla.
Gịnị bụ "Kwuọ ụgwo ugbu a" ma ọ bụ "Kwuọ ụgwo na Họtelu"?
"Kwuọ ugwo ugbu a" pụtara na ị ga-akwụ ma ziga ego gi ozugbo site na igwe mgbasa ozi kọmputa ma ọ bụ kwanu site na ekwe nti gi. Maka kaadị eji akwụ-ụgwọ anyị na-enye Visa, Mastakaadi na American Express. Maka ịkwụ ụgwọ site na ekwe nti, anyi na-enye Mpesa, Tigo na 3G Securities. Ụfọdụ họtelu na ewepu onu ahia ha ma ọburu n’ikwụpu ụgwọ n'ọdịnihu tupu oge eru o.
"Kwuọ ugwo na họtelu" pụtara na ị na-akwụ ụgwo maka onunu akwụkwọ itinyere na họtelu, nke a na-adabere na nhọrọ nke họtelu na-enye, site na ego ma ọ bụ site na kaadị eji eme ihe banyere ego na kọmputa.
Ole mgbe a ga ewepu ego ụgwọ mkwuru site na kaadị akwụmụgwọ m?
M’sepu ego site na kaadị akwụmụgwọ gi ga ewere onodu ozugbo itinyere akwukwo maka onunu na họtelu. Ọ bụrụ na ị bataghi na họtelu nke ikwuru ugwo ya ma kagbuo akwukwo itinyere maka ulo onunu, onu ego a ga enyeghachi gi azụ ga-adabere na atumutu nkagbu iwu nke họtelu di otu a.
Kedu ukpuru eji akwu ụgwọ m nwere ike iji kwuougwo?
Ọ bụrụ ị họrọ "Kwuọ ụgwo ugbu a", ị nwere ike ịkwụ ụgwọ na igwe ozi kọmputa site na kaadị akwụmụgwọ gi (Master Kaadị, Visa, Amex ) ma ọ bụ na MPESA ma ọ bụ TIGO, nke a na adabere na ebe ịkwụ ụgwọ site n’ụzọ ndị a na aru oru.
Ọ bụrụ ị họrọ “Kwuọ ụgwo na Họtelu", i nwere ike ịkwụ ụgwọ site na ego ma ọ bụ site na kaadị akwụmụgwọ na họtelu, nke a na-adabere dịka nhọrọ nke ikwu ugwo. Anyị na enye ndụmọdụ na ị ga ebu ego obodo nke họtelu dị ka ụfọdụ họtelu nwere ike ghara inabata kaadị akwụmụgwọ.
Ọ bụrụ na m họọrọ "Kwuọ ụgwo na Họtelu", m kwesịrị ịkwụnyetu ego ma ọ bụ kwụnyetu na họtelu tupu ma abanye?
Maka họtelu ndi na aju maka ikwunyetu ụgwọ mgbe ana abata na họtelu, ozi a na a di n’okpuru “Atumatu Iwu Họtelu” na peeji họtelu.
M’kwesiri ikwu ugwo ngbakunye ihe ọzọ ma ọ buru m’cho itinye akwụkwọ na Travel.jumia.com?
Ee ee (mba), enweghi ego ugwo ngbakwunye ọ bụla I ga akwu nye Jumia Travel.
Olee otú m ga esi chọputa ọnọdụ ego nkwụghachi m?
Biko kpọtụrụ onye ndumọdụ nke ime njem anyi na ekwe nti maka okwu nile metụtara nkwughachi ugwo nile.
I mee ka ntinye akwukwo gi diwanye nma , biko kpọtụrụ onye ndumọdụ nke ime njem anyi onye ga elekọta maka gị.
Ole mgbe bụ ọhere ikpeazu m nwere ike ịkagbu akwukwo ntinyere maka onunu na họtelu?
Nka ga-adabere na họtelu di iche-iche. Biko rụtụ aka na nkagbuo iwu nke họtelu di otu a bu nke a na- egosipụta na nkọwa peeji họtelu.
Kedu ihe ga eme ma ọ bụrụ na m abiaghi mgbe m’n akwụlari ụgwọ maka onu ụlọ m?
Nke a na-adabere na nkagbuo atumatu na emetụta na akwukwo itinyere maka onu ulo họtelu i mere. Ọtụtụ n'ime họtelu anyi na ekwe ka ị kagbuo akwukwo itinyere tupu ga abanye, ma enwere ike naa gi ego maka nke a bu nke dabere na oge mgbe I mere nke a tupu gị ana abata wee kagbuo akwukwo itinyere. Biko rụtụ aka na nkagbu atumatu nke akwukwo itinyere ma ọ bụ ga akpọtụrụ ndi ndumọdụ nke ime njem anyi.
Enwerem ike ịkagbu ufodu akụkụ otuụ ndi madu n’esom eme njem?
Kpọ ndi ndumọdụ nke ime njem anyi maka nkwado na nke a.
Enwere m ike iji akara ihe akwụkwọ ndepụta ego were kagbu onụ ụlọ m kwurula ugwo ya?
Nkwalite nke azumahia adịghị emetụta atumatu nkagbuo. Otú ọ dị, biko mara na ị nwere ike i gaghị enwe ike iji kwa akara ihe akwụkwọ ndepụta ego koodu (nọmba) gi were mee ihe ọzọ.
Olee otú m ga esi mara nkwenye maka akwukwo ntinyere maka họtelu?
Na ihe gbasara "Kwuo ugwo ma e mesia" ị ga-enweta ozi leta na ihe njikọta. Odi nkpa na I ga apịa na ihe njikọta a wee sii otua gosi nkwenye gi maka akwukwo I debere gi onu ulo họtelu nke itinyere. Ị nwekwara ike inweta oku ekwe nti si n’aka ndi ndumọdụ nke ime njem anyi iji mara nkwenye gi maka akwukwo itinyere maka idebere onu ulo họtelu.
Maka "Kwuo ugwo ugbu a", ozugbo ị kwụrụ ugwo na igwe kọmputa, I ga enweta ozi leta nke ga enye nkọwa akwukwo itinyere maka onu ulo họtelu.
Olee oge ọ ga-ewe ndi họtelu I na ta ihe nkowa akwukwo ntinyere maka onunu na họtelu?
Maka "Kwuo ugwo Ugbu a" – ozugbo ị kwụrụ ugwo na igwe kọmputa, a na edebere gi onu ulo na họtelu.
Maka "Kwuọ ụgwo na Họtelu" – ozugbo ị gosiri nkwenye gi maka I debere gi onu ulo họtelu site na ịpị na ihe ndeputa nke njikota nke enyere gi na leta nkwenye gi, ma ọ bụ mgbe ndi ndumọdụ nke ime njem anyi kporo gi oku ekwe nti, a ga edebere gi onudu na họtelu.
Olee otú m ga esi mara na enwere nkwenye na akwukwo ntinyere maka idebere onu ulo na họtelu?
Ozugbo I na eme nkwenye maka idebere gi onu ulo, Ị ga-enweta ozi leta nkọwa maka nka a tinyekwara ihe nrutuaka nke akwụkwọ itinyere. Mgbe ị natachara ozi leta a, akwukwo ntinye gi bu nke akwadoro ọ bu na di, onu ụlọ na họtelu bụzi nke gị!
Kedu ihe m’kwesịrị ime mgbe ntinyere akwukwo maka ideberem onu ụlọ ma nataghi ozi leta nkwado?
Biko kpọtụrụ ndi ndumọdụ nke ime njem anyi.
Ọ bụrụ kwanu na họtelu ekwetaghị na akwụkwọ ntinyere site na igwe ozi kọmpụta?
Biko kpọtụrụ ndi ndumọdụ nke ime njem anyi ozugbo ka ha ohu ihe banyere nka na onwe ha na etiti ndi họtelu. Anyị na enye ndụmọdụ ka Iwere kwa akwukwo ebiri-ebi oyiri nke nkwenye akwukwo itinyere mgbe nile bu nke I natara site na ozi leta.
Kedu otú m ga esi etinye akwụkwọ?
Kedu otú m pụrụ isirute ndi ahịa ọrụ otu enyemaka?
Ị nwere ike kpọ anyị oku na ekwe nti, soro anyi kori a, kpo anyi oku ekwe nti ma ọ bụ kawnu na ihe nzirite ozi Skype nye anyi n'oge obula, n'ebe ọ bụla! Maka ihe nkọwa banyere nke a kari, pia na ebe a.
Kedu otú m pụrụ isi mara onu ego ole ọnu ulo họtelu bu?
Ozugbo ị debanyere akara ụbọchị nke ọnụnọ gị, aga edeputasi onu ego ahia bu nke ga esote na ebe odi ogo na akuku họtelu nile obula.
Kedu otú m nwere ike iji gbambo hu na edebeerem onu ụlọ ma ọ bụrụ na m na-ahọrọ ikwo-ugwo ma emesi a?
Owuwe anyi diri gi ma itinye akwụkwọ maka idebere gi onu ulo hotelu na Travel.jumia.com. Ị ga-enweta a leta nkwenye na nke ncheta tupu ga abanye. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko kpọtụrụ ndi ndumọdụ nke ime njem anyi.
Olee otú m nwere ike isii tinye ihe arịrịọ pụrụ iche nye ndi họtelu? (Dịka. Onu Ụlọ nwere ezi ihe m’lepu anya na ezi)
Gbambo hu na i ga egosi ihe arịrịọ pụrụ iche ọ bụla na oge nke ntinye akwụkwọ na igbe enyere maka nzube a ebe ndi ndumọdụ nke ime njem anyi ga-elekọta maka ya nye gi.
Enwere m ike ịtinye akwukwo maka idebe onu ulo họtelu n’ihi onye ozo?
Ee, ị pụrụ itinye akwụkwọ maka onye ọzọ. Cheta tinye akara gudụ na bọtịnụ na -ekwu, "Anaghi m anọ na họtelu a. Ana m eme ndoputa nka a maka onye ọzọ" n'oge nke ntinye akwụkwọ. Mgbe ahụ nkpa di na I ga entiye ihe nkọwa onye ọbịa. Aga ezigara gi leta nkwenye maka nka na akara adreesị iji anata ozi leta.
Olee mba obodo unu nwere họtelu na ya?
Anyị nwere họtelu n'ụwa nile, n'agbanyeghị ebe ị chọrọ ịga. Anyị nwere ọnụnọ n'ebe ahụ.
Olee otú ngwangwa m’kwesiri iji tinye akwụkwọ n'oge?
Ị nwere ike itinye akwụkwọ maka họtelu n'oge ọ bụla. Ma Otú ọ dị, anyi na ario ka itinye akwụkwọ maka I debere gi onu ulo họtelu n’oge maka ikwe gi nkwa nnweta nke ọnụ ụlọ.
M’kwesịrị inwe akaụntụ na Jumia Travel maka itinye akwukwo maka idebe ọnụ ụlọ na họtelu na ihe ozi cọmputa azumahia nke mba uwa Jumia Travel?
Ọ dịghị, ọ dịghị mkpa ọ bula na I ga enwe akaụntụ ọ bula na Jumia Travel maka itinye akwukwo nke idebere gi ọnụ ụlọ na họtelu.
Gịnị mere oji kwesị na iga emepụta/mepee otu akaụntụ?
Maka ime ka uzo isi etinye akwukwo na Travel.jumia.com na adi ohu ọ, ngwamgwa ma dikwa na usoro di mfe site na ichọta akwụkwọ nile etinyere na otu ebe.
Echefurum akara mbada paswọọdụ m, o bu gini ka m kwesịrị ime?
Ị nwere ike ịrịọ maka ntugharịa akara mbada paswọọdụ ọhụrụ na peeji m’banye na Travel.jumia.com, n'okpuru "Ichefuru Paswọdu?"
Olee otú m ga esi agbanwee akara mbada paswọọdụ m?
Mgbe ịbanyere n'ime akaụntụ gị , pịa na "Akaụntụ Gị" pịa na "Gbanwee Paswọdụ” site na ihe ndeputasi ihe nke nwedaa n'elu. Ma ọbu kwanu, gaa na "Ntọala". Gaa na "Paswọdụ" ma pịa "Dezie".
Gịnị ka onu ahia gụnyere?
Onu ahia ego egosiri na ihe mba uwa computa bụ mkpokọta onu ego (na igbakwunye ụtụ isi na ụgwọ nile) ị ga akwụ ụgwọ maka ulo onunu gị, ma obu kwanu I gaghi akwu ma oburu ma edeputa nke a n’akwukwo. Mgbe ụfọdụ ugwo na adi na họtelu (Na omuma atu: ụtụ isi njem nleta), ma nke a na adi n'ụzọ doro anya na akwukwo itinyere. Ọ bụrụ na ndi họtelu asi gị kwụo ụgwọ mgbakwunye ọzọ n'ụdị kaadị ụgwọ, ụtụ isi, echetaram echetaram, biko, mee ka anyị mara, anyị ga agbamgbo hu na enyeghachiri gi ego gi hukwa na nke a agaghị eme ọzọ. Ọ gwula ma nke a okwuru n'ụzọ doro anya na akwụkwọ itinyere maka onunu na ụgwọ agụnyeghi mmanya ọṅụṅụ, ihe omume, echetaram echetaram. Agụnyere nri ma nka dabere na udị ihe ndi ana enye na udi akwukwo itinyere mgbe I na kpoturu anyi ( Akwa ndina nanị: Nri esoghi, Akwa ndina na nri ụtụtụ: na nke a, agụnyere nri ụtụtụ, ọkara atumatu: agụnyere nri abụọ, atumutu zuruoke: agụnyere nri nile).
Agụ nyere nri ụtụtụ na onu ego?
Ụfọdụ họtelu nwere ike gbakwunye ma ọbu hapu igụnye onu ego nke nri ụtụtụ. Ị nwere ike ịhụ nke a na ihe nkọwa nke họtelu.
Gịnị mere m’gaghi eji hu akara ekwentị na adreesị ozi leta nke ndi họtelu?
Na Jumia Travel anyị eji ndi ọrụ nlekọta ndị ahịa anyi anya-isi. Site na anyị na gi imekota ihe obu na di anyi ikpoturu ndi họtelu, nke a pụtara na I ma ihe I na atụ anya ya. Anyị na agba mgba megide nsogbu nile obula, nsogbu dika mgbochi na adi na ighota asụsụ ndi obodo ozo, n’ihi nke a, odighi otú ihe ọ bụla funariri anyi na mtughari asusu.
Olee udi akwokwo nkowa onwe a na- anabata họtelu?
Were na oge nile njirimara akwụkwọ dị ka akwukwo ikike onye ọkwọ ụgbọala, kaadị nkowa obodo gi ma ọ bụ paspọtụ (Foto mkpirishi) iji gosi na ị bụ onye tinyere akwukwo maka idebere gi onu ụlọ na họtelu.
Enwere m ike ịtinye maka họtelu na mba uwa ozo na abughi Afrika?
Nezie! Jumia Travel n’enye ohere maka itinye akwụkwọ maka idebe họtelu na obodo nile nke ụwa.
Enwere m ike ibata na azu oge na abughi na oge kwuru na usoro iheomume?
Arịrịọ gbasara oge mbata and oge ọpụpụ bu ihe dabere n’aka ndi họtelu. Ọ bụrụ na ị ga-achọ itinye arịrịọ maka mbata na ọpụpụ, Ị nwere ike debanye nke a na igbe "I nwere ihe ndi i choro puru iche?” mgbe ị na etinye akwụkwọ maka I debere gị onu ulo na họtelu. Ma ọ bụ kwanu, ị nwere ike kpọtụrụ ndi ndumọdụ nke ime njem anyi ndi ga-elekọta arịrịọ gị.
Olee otú m ga-esi enweta ụgbọala nke ndi ọdụ ụgbọelu?
Ọtụtụ n'ime họtelu na-enye ụgbọala na aruọrụ na ọdụ ụgbọelu. A na edepụtakarị nke a dị ka otu akụkụ ihe nkọwa nke họtelu. Na ihe omume ha na-adịghị enye ihe ndi a, anyị ga aroputara gi ha si n’uzo ozo.
Enwere m ike I hapụ ibu m na họtelu, tupu m’kwabanye ma ọ bụkwanu mgbe m’kwapurula?
Nke a na adebere na họtelu di ichi-iche. Ọ bụrụ na ị chọrọ I nwe obi si ike na nka biko kpọtụrụ ndi ndumọdụ nke ime njem anyi. Cheta kwa na oge nile na họtelu agaghị ahu ihe obula gbasara ihe ọ bụla fụrụ ma ọ bụ ihe mmebi ọ bụla mere site na g i I hapụ ibu gị na họtelu.
Kedu otú m pụrụ isii rịọ maka Mgbakwunye akwa ndina nta ọzọ n'ime ụlọ?
Arịrọ maka mgbakwunye akwa ndina bu nke I puru ime n'okpuru Igbe nke arịrọ "I nwere ihe ndi i choro puru iche?" mgbe I na etinye akwụkwọ gị maka idebere gi onodu na họtelu.
Kedu otú m pụrụ isii kpọtụrụ ndi họtelu?
Ndi ndumọdụ nke ime njem anyi njem ga anara arịrịọ gi nile ma ọ bụ ihe nsogbu ọ bụla I na ezute na uzo gi. Ị nwere ike ịkpọtụrụ ha site na nọmba ekwe nti ndi egosipụtara n'elu peeji ma ọ bụ site na gi na ha inwe mkparikata uka na ekwe nti ma ọ bụ site na ihe ozi leta ma ọ bụ site na ozi skype.
Gịnị bụ mhazi nke kpakpando?
Mhazi kpakpando na egosi udi na ihe ọrụ eji ebi ndu nke họtelu. Ihe mlekwasi anya na mhazi ma ọ bụ ọnụego nke họtelu na adi iche-iche site ná mba ruo ná mba.
Kedu otú m ga esi mara ọdịiche dị n'etiti mhazi nke otu kpapkando, kpapkando abụọ, kpapkando atọ, kpapkando anọ na kpakpando ise nke họtelu?
Dị ka ekwuru na mbụ, Ihe mlekwasi anya nke mhazi nke hotelu bu nke na adi iche-iche site ná mba ruo ná mba. Ma Otú ọ dị, nke a bụ ihe ga enyere gi aka iji mara ihe I na-atụ anya ya na aka ndi họtelu.
Otu – Ulo oru ndi madu nwe ndu dabere na onwe ha na abughi nke goomenti na adi kari nta. Họtelu ga-enye ulo na ngwangwa ọrụ eji ebi ndu na ebe odi ala ma dikwa mfe.
Abụọ – Ulo oru ndi di nta ma obu ndi katu ya ukwu u. Họtelu ga – enye ihe ọrụ eji ebi ndu karịrị họtelu eji otu kpakpando mara. Apuru inye gi nri na mmanya ọṅụṅụ ma itinye akwukwo arịrọ maka nke a. Apukwara inye gi igwe ntu oyi.
Atọ – Ulo oru ndi nwere otutu ndi oru na iroputa ogbogbo nye nkpa gi. Onu Ụlọ sara mbara ma nwekwa ngwa eji ebi ndu di nma. Ihe eji esirite ozi nke igwe computa nke nwa beeke n’akpo intaneti na igwe ntu oyi di buru kwa n’efu. Ojije ozi na onu ulo na ụlọ na ulo oriri na ọṅụṅụ na adikari na ogige nke họtelu.
Anọ – Họtelu ndi na adi site na ogo nke a na adi kari nnukwu, na arụ ọrụ ma n’enye kwa ngwa ndi eji ebi ndu di elu. Onu ụlọ ya na ebu-ibu, burukwa nke ana ahazi nke ọma tinye kwa ya akwa ndina di nma na ohere ebe I noọdụ ala nwere ebe a na annụ mmanya. Ana etinye akwa mmiri na akpukpu ukwu na kwa ihe eji aga mkpochi na ime ulo ebe a na asa ahu ya.
Ise – Họtelu dara oké ọnụ, na-enye ndi ahia ha ihe oru na kwa ihe ndi eji ebi ndu tara ochichi. Họtelu ndi di otu a na enye ihe obibi ndu di elu dika ebe igwu mmiri nke nwa beeke na akpo (swimming pool), ebe izuike na ilekota ahu ike na enye kwa ụlọ ebe a na eri ihe oriri na mmanya onụnụ di nma nke ukwu.
Kedu ihe dị iche iche na mhazi nke ọnụ ụlọ họtelu?
Nke di ala - Nke a bu ụdị onu ụlọ ndi họtelu na enyekari. Ihe eji aru oru ma na ebi kwa ndu na ya na adabere na mhazi nke kpakpando họtelu di otu a.
Nke di elu - Onu ulo di otu a na enye ezi ihe eji ebi ndu kari udi onu ụlọ nke mbu. Onu ulo ya na enwe kari ohere, akwa ndina di mbara ma nwekwa ebe esi elepu anya di nma.
Deluxe (Onu ulo nke di elu kari) - Onu ụlọ di otu a bu onu ụlọ nke kachasi nma nke họtelu na enye. Ha na enwe kari ohere buruibu ma ebe isa ahu ya, ihe eji ebi ndu ha bukwa nke di elu bu nke na a dabere na kpakpando nke họtelu di ọtu a.
Suite (Onu ulo nke kachasi nma) - Onu ụlọ di otu a bu nka ya na onu ulo nke di elu kari nọ na otu ogugo, onu ulo ma ulo obibi ya na a di iche site na ebe ndi ozo di. Ha na enwe ulo ebe a na esi nri.
Gịnị bụ Nhọrọ nke Jumia Travel?
Nhọrọ nke Jumia Travel bụ họtelu ndi mere ihe omume na ihe omume nke Jumia Travel. Họtelu ndị a na enye ezi ihe ọrụ tara ochichi buru kwa nke enyochara ma na agbakwara ezi ama site na aka ndi ahịa ya. Site na I dabere na anyị na ndị a ahịa anyi na ekwusi okwu ike maka họtelu ndi a.
Kedu ihe bụ ọnụego nke họtelu ime obodo?
Ọnụego họtelu di na ime obodo bu nke dabara naanị maka owuwa anyanwu mba African (Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda na Uganda). Ụfọdụ họtelu na ewepu ego na onu ahia ha nye ndi bi na mba ndị a. Mwepu na onu ego ahia nye onye ahia bi na obodo ndi a putara na onye di otu a ga egosi ihe nkowa onwe nye ndi họtelu. Na emeghị otú ga ebute mgbakwunye ego ọzọ.
Kedu onu ogugu madu ole ke ebi na otu onu ụlọ?
Onu ogugu madu ole ga ebi na otu onu ụlọ bu nke a na enye nkowa ya na peeji nkowa na akụkụ udi onu ulo ọ bụla.
Kedu otú esi enye onu ulo maka ụmụaka na họtelu?
Nke a na a dabere na họtelu dịgasị iche iche na ọtụtụ oge na a dabere kwa na afọ nke ụmụaka. Atumatu banyere mgbakwunye akwa ndina bu nke a na egosipụta nkowa ya peeji họtelu na ihe mbauwa computa anyi anyi ji aru oru a na akpo (website) na olu beeke. Kpọtụrụ ndi ndumọdụ nke ime njem anyi maka ajụjụ o bụla kpọmkwem nke ọnọdụ gị.
Kedu ebe m pụrụ ime nyochaa?
Mgbe I kwapụrụ na họtelu, ị ga-enweta ihe ozi leta iji mee nyochaa maka họtelu di otu a. Ị nwekwara ike I nweta oku enweta site na aka ndi ndumọdụ nke ime njem anyi banyere otu ihe a. Aga edepụtasi nyocha ndi a na Travel.jumia.com (mgbe oga fechara ihe nyocha anyi).aga asikwa gi nyochaa ọrụ Travel.jumia.com n'ozuzu oke.
Ekele di mkpa nye maka nyocha ezi ọlụ ọ bụla aluru nke ọma. Gwa ndị ọbịa ọzọ maka udi ojije ozi anyi na enye ma si otua nyere anyị aka ime nke oma kari Travel.jumia.com.
Anyi no ebe a i nye aka,
e gbula oge i kpo anyi!
Dere anyi ozi